Health Tips Healthy Lifestyle Pregnancy and Women Health
Jul 1, 2022 Hope
မီးနီကိုရွှေ့ပြီး သွားစရာရှိတာ သွားကြမယ် “ဒီတစ်ပတ်ထဲ ခရီးထွက်ပါ့မယ်ဆိုမှ ရာသီလာမယ့်ရက်က ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်။ ခရီးကလည်းမသွားမဖြစ်သွားရမှာ အလုပ်ကိစ္စနဲ့မို့။ စိတ်ညစ်ပါတယ်။ ဒုက္ခတွေတော့များတော့မှာပဲ…” ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကို ပျိုမေတိုင်းနီးပါး ကြုံဖူးကြတယ်ဟုတ်? အရေးကြီးတဲ့ပွဲတက်ဖို့ရှိတာ၊
Health Health Tips Healthy Lifestyle
Jun 28, 2022 Hope
အမျိုးသားတွေရဲ့ ပျမ်းမျှသက်တမ်းက အမျိုးသမီးတွေထက် ၅နှစ်ပိုလျော့နည်းတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား အမျိုးသားတွေရဲ့ပျမ်းမျှသက်တမ်းဟာ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ယှဉ်ရင် ၅နှစ်ခန့်ပိုမိုလျော့နည်းနေတာကို လေ့လာမှုတွေအရ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါဘာကြောင့်လို့ သင်ထင်ပါသလဲ ဇွန်လဟာအမျိုးသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့လဖြစ်တာကြောင့် ဒီနေ့မှာတော့ အမျိုးသားတွေကျန်းမာရေးအသိပိုရှိလာစေဖို့၊ ကာကွယ်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်
မပေါ့ဆသင့်တဲ့ နာတာရှည် ဂေါက်ရောဂါ ဂေါက်ရောဂါလို့ ကြားလိုက်တာနဲ့ သင်ဘာကိုမြင်မိလဲ? သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရော ဒီရောဂါခံစားနေရတဲ့သူတွေကို သင်တွေ့ဖူးပါသလား? ဒီရောဂါမဖြစ်အောင် လိုက်နာရမယ့်အချက်တွေကိုရော သင်သေချာသိပြီးပါပြီလား? ဒီနေ့မှာ‌တော့ ဒေါက်တာတို့က ဂေါက်အဆစ်မြစ်ရောင်ရောဂါနဲ့
Health Tips Healthy & Beauty Healthy Lifestyle
Jun 27, 2022 Hope
ဝက်ခြံတွေကို အလျင်အမြန် တိုက်ထုတ်ပေးမယ့် Benzoyl peroxide မျက်နှာပေါ်မှာ ဝက်ခြံတွေများသထက်များလာလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးနေပြီလား? ဝက်ခြံပေါက်တဲ့ ကိုယ့်အသားအရေအတွက် Skincareတွေ တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုးပြောင်းသုံးနေရလို့ အကုန်အကျတွေများနေပြီလား?
Health Health Tips Healthy Lifestyle Pregnancy and Women Health
ရှက်စိတ်ကြောင့် ဖုံးကွယ်ထားရင် အသက်သေဆုံးစေတဲ့ ရင်သားကင်ဆာ
Jun 25, 2022 Hope
ရှက်စိတ်ကြောင့် ဖုံးကွယ်ထားရင် အသက်သေဆုံးစေတဲ့ ရင်သားကင်ဆာ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရင်သားကင်ဆာကြောင့် ရင်သားဖြတ်ထားရတဲ့သူတွေ၊ အချိန်မီမကုသနိုင်လို့ အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူတွေကို သင်တွေ့ဖူးပါသလား? ကမ္ဘာပေါ်က အမျိုးသမီးရှစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်က ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ ၁၃